Zangoku kwaye ziLungile - I-Airbnb
Zangoku kwaye ziLungile
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTyrone
Ezimihla ngemihla nezinamagumbi aliqela, ziqulethe igumbi lokulala eliyi-1, kumahala kwindawo ethe cwaka. Ixabiso yi-USD $.
Le ndawo ayinamathandabuzo; inendawo evulekileyo nefenitshala epheleleyo, i-smart tv nendawo yokuhlamba iimpahla.
Indawo efanelekileyo, umgama wokuhamba ukusuka kwindawo yokuthenga, indawo yokubhaka, iibhari, iikhefi, iiklabhu zasebusuku kunye neevenkile zokutyela.
Ifumaneka kumgama wokuya kwisikhululo seenqwelo-moya i-Nadi International, i-Wailoaloa Beach kunye nedolophu yase-Nadi.
zimenyiweyo Ayikho indlu yeepati.
Indlu ikwindawo ekhuselekileyo kwaye ikhanya kakuhle ngaphandle emva kokutshona kwelanga. Izibane zangaphandle zilayita ngokuzenzekelayo ebusuku. Sisekupheleni kwe-c cul-de-sac kwindawo ekufutshane yokungena imoto. Unendawo elungiselelwe ukupaka imoto.
Umbuki zindwendwe uhlala kwiyunithi engasemva ibe sisebenzisa isango elifanayo lokungena endlwini. Isango kufuneka litshixwe ngamaxesha onke.
Iflethi yindlu ekwicomplex, enomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu; njengeoveni, isitovu segesi esine, ioveni ye-microwave, iketile yombane, into yokupheka irayisi, ifriji, iimbiza neepani, izitya, iayini yombane, umatshini wokuhlamba impahla nowokucima umlilo...njl.
Le ndawo inezinto zokucoca; iti, ikofu, iswekile, ioyile yokupheka, ityuwa, iplastiki yokuhlamba, isepha yokuhlamba, i-shower gel, ishampu neetawuli zokuhlamba. Nceda ugcwalise ezi zinto ukuba ufuna ezingakumbi.
I-intanethi (wena-tube kunye neemuvi) ifumaneka imini nobusuku nge-smart TV enikezelweyo okanye ngokungena ngephasiwedi enikezelweyo.
Unokujonga uNetflix ukuba unayo iakhawunti yakho.
Cima umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu nezixhobo zokupheka ngaphambi kokuba uphume ukuze unciphise ungcoliseko lomoya uze wonge amandla.
Ukutshaya akuvumelekanga, ngaphandle kulungile.
Susa izihlangu xa ungaphakathi kweflethi okanye indlu ekwicomplex, ii-slippers nezihlangu zamkelekile.
Ixesha lokungena: 2.00pm, Ixesha lokuphuma: 10.00am
Lo mhlaba umi kwindawo ezolileyo ngokubanzi kwaye kumgama wokuhamba ukuya kwizinto zoluntu.
Umbuki zindwendwe ngu- Tyrone
Njengoko sihlala kwiyunithi engasemva, siyafumaneka ukunika uncedo ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.